Fuudhaa Heeruma Archives - Ibsaa Jireenyaa
Category: Fuudhaa Heeruma
April 9, 2019 Sammubani One comment
March 5, 2019 Sammubani Leave a comment
Waa’ee Gaa’ilaa ilaalchisee barruuleen addaan ciccituun ji’a lamaaf dhiyaataa turan kunoo haala kitaabatin walitti qabamanii jiru.
Jireenya tana keessatti lubbuu qabeenyin yommuu cimdiin walitti dhufan wal horu. Osoo cimdiin kuni jiraachu baate silaa wal hormaanni hin adeemsifamu ture. Dhalli namaa uumamtoota biroo irraa adda ta’uun karaa kabajamaa fi jaallatamaa ta’een akka wal horan Rabbiin (subhaanahu wa ta’aalaa) seera ka’e. Kuni kan agarsiisu kabaja Rabbiin ilma namaatiif kenneedha. Akka horii walitti dhufuun akkuma argan hin ta’an. Karaan seera-qabeessa isaan walitti dhufan karaa gaa’ilaatin ykn fuudhaa heerumatin. Jechoonni gaa’ila, fuudhaa heeruma, nikaah fi kkf yommuu gurra irra bu’an, dargaggoonni fi shamarran ni mirqaanu. Sababni isaas, fedhii uumamaa keessa isaanii jiru karaa ittiin guuttataniidha. Gaa’illi seera mataa ofii qaba. Akkanumatti lafa olka’anii kan itti deemanii miti. Kitaaba kana keessatti, waa’een gaa’ila (fuudhaa heeruma) Qur’aanaa fi hadiisa wabii godhachuun haala salphaan ibsame jira. Linkii kana tuquun buusu dandeessu: https://sammubani.files.wordpress.com/2019/03/gaaila-islaamaa.pdf
February 20, 2019 Sammubani Leave a comment
Nushuuz (Fincila) Haadha Manaa
Dhiiraa fi dubartiin wal fuudhan waliin jiraachu erga eegalanii guyyaa tokko wal loluu fi wal mormuun hin oolu. Haati manaa abbaa manaa ishii irratti ol’aantummaa agarsiisu fi isa faallessuu dandeessi. Gocha akkanaatin nushuuz (fincila) jennaan. Kanaafu, nushuuz (fincila) jechuun isarratti ol’aantummaa agarsiisu, isaaf ajajamuu diduu fi isa faallessudha. Yeroo kanatti abbaan manaa maal gochuu danda’aa? Alhamdulillah Islaamni maal gochuu akka qabuu isaaf ibsa. Akka warroota amantii hin qabnee dallansuun bokokuun haadha warraa akka hin galaafanne, tarkaanfilee hordofuu qabu lafa kaa’a. Fincilli dubartii qofarraa osoo hin ta’in dhiira irraayis ni mul’ata. In sha Allah kutaa itti aanutti ni ilaalla. Ammaaf fincila haadha manaa ilaalla.